Inzuzo yobuchwepheshe bokuphrinta obuhlanganisiwe kukhathalogi yekhathalogi china-Blog-Book Printing China
Inzuzo yobuchwepheshe bokuphrinta obuhlanganisiwe kukhathalogi yokuphrinta i-china
isikhathi: 2020-01-07 Okuhamba phambili kwe-: 82
1. Izinzuzo zobuchwepheshe zokunyathelisa okuhlanganisiwe
Ngokuhlanganiswa kokuphrinta, imvamisa isebenzisa ubuchwepheshe nobuchwepheshe obuhlukahlukene bokuphrinta. Ngakho-ke, ukuhlanganiswa kokuphinda kuhlanganise izinzuzo zobuchwepheshe obuhlukahlukene bokuphrinta nezinqubo. Ngenjwayelo, ukuphrinta okuhlanganisiwe kuvame ukuhlanganisa izinzuzo ze-intaglio, isethi, flexo, nokuphrinta kwesikrini.
2. Izinzuzo zezindlela ezahlukahlukene zokuphrinta zimi kanje:
1) Idizayini yokuphrinta ye-Intaglio inezinzuzo zokusebenza kahle kokukhiqiza, ukuvumelana okuhle kombala, ukuzivumelanisa nezimo okuhle kwezinto zokuphrinta njalonjalo. Isebenza kahle emkhakheni, umbala webala, igolide (esiliva) ukuphrinta inki nokunye, futhi ingahlangabezana nezidingo eziqinile zekhwalithi yokuphrinta yokupakisha.
2) Ukuphrinta kwe-Offset kunesethi yendlela ejwayelekile futhi eqhutshwa yidatha, ezingeni elicebile lokukhiqizwa kokuphrinta.
3) Ukuphrinta kwe-Flexographic kunezinzuzo ezingenakuqhathaniswa nokuphrinta kwebhulokhi yensimu, ngenxa uyinki omfushane, ukuphrinta ngaphandle kokuphazamiseka kwe-chromatic. Ikakhulukazi ngokuthuthuka okusheshayo kokuthengiswa kokuphrinta kwe-flexo, ezifana nezinto zepuleti, imishini yokwenza amapuleti, imishini yokuphrinta, Ikhwalithi yokuphrinta ye-flexo yathuthuka ngokushesha, ukukhiqiza kabusha okuhle okuhle, ingahlangabezana nezidingo eziphakeme zokuphrinta, okubaluleke ngokwengeziwe ekushicilelweni kwelebuli nokupakisha.
4) Futhi ukuphrinta kwesikrini, ingaveza ungqimba oluningi lukayinki, yakha i-concave ne-convex, iqhwa, ukuphikisa, izimbali zeqhwa, imibimbi neminye imiphumela, ngaleyo ndlela kuthuthukise kakhulu umphumela wokubuka wezinto eziphrintiwe, okuzoheha ngokwengeziwe kokukhethekile ikhathalogi yokuphrinta china.
Kafushane, inhlanganisela yokuphrinta ayigcini kuphela ngezici zezindlela zokuphrinta ezithuthukisiwe ukuze zithathe ngokungacabangi nangokucacile, kodwa futhi nokwenza ngcono izinga lebhizinisi nekhwalithi yomkhiqizo wokuphrinta. Futhi iphayona elisebenzisa ubuchwepheshe bokuhlanganisa bokuphrinta nalo lizothola inzuzo enhle.
Ufuna ukwazi ngolwazi oluthe xaxa mayelana ne- ikhathalogi yokuphrinta china, zizwe ukhululekile ukuvakashela: www.bookprintingchina.com, futhi ingakwazi xhumana ne-sales@bookprintingchina.com.
Okwangaphambilini Ikhasi : Yini izinto ngentengo yekhathalogi yokuphrinta i-china?
Ikhasi Elilandelayo : Ukuphrinta kwemboni kusifinyeza kanjani isikhathi sokukhiqiza futhi kuthuthukise ikhwalithi yomkhiqizo